Ukubuka iindwendwe Kwinto Enokonwatyelwa kwi-intanethi - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Joyina intsapho Yababuki Zindwendwe edibanisa bonke abantu ngendlela entsha.
Ngaphambi kokufaka into enokonwatyelwa kwi-intanethi, nceda ufunde imigangatho nezinto ezifunekayo Kwizinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb nezinto ezifunekayo ngokukhethekileyo Kwizinto Ezinokonwatyelwa kwi-intanethi.
Xa ufaka into yakho enokonwatyelwa ukuze yamkelwe, kuza kufuneka ufake ezi zinto:
Umxholo wento yakho enokonwatyelwa
Ingcaciso, kuquka indawo oza kuyenza ukuyo nento eyenza yahluke
Ingcaciso yento eyenziwayo, kuquka ukuchaza kakuhle izinto eziza kwenziwa
Izinto ezibonisa ukuba uqeqeshiwe, amava akho okanye izinto ezibonisa ukuba uyafaneleka
Ingcaciso yezinto iindwendwe ekufuneka zize nazo
Iifoto ezikumgangatho ophezulu zento yakho enokonwatyelwa, kuquka ifoto yakho uthetha phambi kwekhamera yakho okanye ikhompyutha ukuze kubonakale ukuba le nto enokonwatyelwa yenziwa kwi-intanethi
Ifoto yesazisi, kuba uza kucelwa ukuba uqinisekise ukuba unguwe nyhani
Xa unento oyicebayo entle nazo zonke iinkcukacha, qalisa ukuyifaka. Funda ukuba kufuneka ulindele nto emva kokuba uyifakile.
Indlela ezisebenza ngayo
Izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi zenziwa ngoZoom, i-software yenye inkampani yokwenza iingqungquthela ngevidiyo, oza kuyidinga nayo kwinkqubo yokuyifaka. Nazi zonke izinto ekufuneka uzazi ngokusebenzisa uZoom Kwizinto Ezinokonwatyelwa kwi-intanethi.
Ukubhukisha kusebenza ngendlela efanayo naleyo isetyenziswayo Kwizinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo
Xa ixesha lifikile, iindwendwe ziza kufumana ilinki yokujoyina intlanganiso yakho kaZoom
Ungasebenzisa Igumbi Lokulinda likaZoom ukuze uzifake emva kokuqinisekisa ukuba zibhukishile
Ukuba awunangxaki ngokuvumela iindwendwe ezininzi zijoyine ngesixhobo esinye, chazela iindwendwe kwingcaciso yakho ukuba zidinga nje ukubhukisha indawo enye. Ungakwazi nokwamkela iindwendwe Kwizinto Ezinokonwatyelwa zeqela labucala, apho iindwendwe zinokubhukisha zonke iindawo Zento Enokonwatyelwa ngosuku nexesha elithile.
Amaxabiso neemali ezongezelelekileyo ezimele zibhatalwe
Imali oza kuyibiza ixhomekeke kuwe Yezinto Ezinokonwatyelwa zomntu wonke nezamaqela abucala. Usenokufuna ukuqala ngexabiso eliphantsi uze ulinyuse njengoko uqhela kwaye ufumana iinkwenkwezi eziyi-5 ezimbalwa kwizimvo. NjengaKwizinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo, uAirbnb uza kubiza imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb Yombuki Zindwendwe, ngaphandle kokuba loo nto enokonwatyelwa yeyokwenza umahluko ekuhlaleni.
Ixabiso leZinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi lenziwe lalixabiso lomntu ngamnye ngokuzenzekelayo. Ukuba bekubhukishelwe umntu omnye uze uphawule ukuba kukho iindwendwe eziyi-2 Kwigumbi lakho Lokulinda, ungabacela ukuba babhatalele lo mntu wongezelelekileyo Kwiziko Lezemali.